XOG: Sida Shabaab ay ku galeen SYL Hotel, Mas’uuliyiinta wax noqotay iyo xaalada xiliga. | XAL DOON
Home NEWS XOG: Sida Shabaab ay ku galeen SYL Hotel, Mas’uuliyiinta wax noqotay iyo...
XOG: Sida Shabaab ay ku galeen SYL Hotel, Mas’uuliyiinta wax noqotay iyo xaalada xiliga.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar maqribnimadiiCaawa ay shabaab ku galeen dhismaha Hoteelka sida weyn loo ilaaliyo ee SYL, kaasoo ku yaala ka soo horjeedka iridka laga galo madaxtooyada Soomaaliya.
Sida wararku sheegayaan, Weerarkan oo ku bilowday Bambaanooyinka nooca gacanta laga tuuro waxaa geystay Shan nin oo hubeysan, iyagoo mar kaliya rasaas iyo qaraxyo ku boobay ilaaladii Hoteelka, iyadoo xiliga weerarka uu ahaa waqti kamid ah kuwa ugu mashquulka badan SYL.
Saraakiil laamaha amaanka ka tirsan ayaa Warbaahinta Xaldoon.Net u sheegay in Kooxda weerarka soo qaaday ay wateen dharka Ciidamada dowladda, taasoo keentay inaan laga shakin iyadoo loo heystay ilaalda Wasiirada iyo Xildhibaanada Hoteelka ku jirtay.
Arinta weerarkan ku cusub ayaa ah in Kooxda weerarka fulisay ay ahaayeen kuwo si caadi ah u lugeynayay, halka amrkii hore Shabaab looga bartay in gawaari qaraxyo ah ku furtaan Albaabada Hoteelada ay weerarada ku qaadaan.
Xiliga weerarka uu dhacayay waxaa gudaha Hoteelka ka socotay munaasabad ay gabar dhalinyaro ah ku soo bandhigeysay Buug ay qortay, Inkastoo gabadha Buugga qortay aysan Hoteelka xiligaa ku sugneyn ayaa hadana waxaa kamid ah dadka wax gaaray qaar kamid ah martideeda, halka kuwo kalena nolol iyo geeri toona lagu heyn.
Ciidamada ilaalada madaxtooyada ayaa Caawa oo dhan la dagaalamayay dableyda weerarka qaaday, iyadoo kua dkaatay iney howlgalka soo afjaraan, iyadoo uu gacanka Ciidamada iska maqlaan ka ahdlay Taliyaha Booliska gobolka Banaadir Saadaq Joon, kaasoo dalbaday in howlgalka isaga loo daayo.
Saadaq Cumar Xasan Saadaq Joon, ayaa isaguna ku adkaatay arinta, taasoo keentay inuu Taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo dalka ka maqan uu soo amro in Ciidanka Alpha Group ay howsha ku baxaan.
Xaalada ayaa wali ah id cakiran, iyadoo mararka qaar la amqlayo Bambaanooyin ay ridayaan dableyda weerarka qaaday, waxeyna kor u fuuleen dabaqyada qaar ee Hoteelka, taasoo god dheer sii galineysa rajada ah in raga la toogto.
Waxaa ka mid ah xildhibaanada illaa hadda la soo badbaadiyey xildhibaan Maxamuud Cali Magan oo sida wararku sheegayaan dhaawac qaba, iyo xildhibaanada kala ah Axmed Dhegaweyne iyo Jaamac askar.
Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyada weerarka, iyagoo ku faanay in dableydooda ay ka dhex dagaalamayaan gudaha Hoteelka.